“रामधुनीका किसान तरकारी खेतीले आत्मनिर्भर बन्दै” -
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १७, २०७३ समय: ९:४९:१६
बैदेसिक रोजगारमा साउदी ओमेन पुगेका रामधुनी ३ का विरेन्द्र्र चौधरी विदेशमा छँदा दुःख पाएको र कमाई पनि राम्रो हुन नसकेको बताउछन् । तीन वर्षको साउदी बसाई पछि २०६९ सालमा स्वदेश फर्केका चौधरी घरमा नै सामान्य खेती किसानी गरी बस्न थाले . त्यसै क्रममा युथ क्रियशन सुनसरी मार्पmत वल्र्ड भिजन इन्टरनेनल नेपाल, सुनसरीको सहयोगमा संचालित जीविकोपार्जन परियोजनाको सहयोगमा २०७१ सालमा तीन दिने तरकारी खेती सम्बन्धि तालिम लिई तरकारी उत्पादन गर्न थालेको उनको पहिलो अनुभव छ । सुरुवातमानै तरकारी खेतीबाट आम्दानी लिन सफल भएका चौधरी हाल सात कट्ठा जमीन भाडामा लिई व्यवसायिक तरकारी खेती गरीरहेका छन् । हाल उनको बारीमा बोडी, साग, बैगुन लट्टरम्म फलेको छ भने मौसम अनुसारको गोल भेडा, काउली, करेला लगाएतका बालीबाट बार्षिक तीनलाख भन्दा बढि आम्दानी गरीरहेका छन् । उनकै देखासिकी गर्दै छिमेकीहरुले पनि खेती गर्न थालेको उनी बताउछन् । साथै छिमेकी गा.वि.स. डुम्राहा, बक्लौरी, कालाबञ्जरका कृषकहरु पनि उनकोमा सिक्न आउने गरेका छन् । तरकारी खेतीमा नयाँनयाँ प्रवीधिहरुको प्रयोग गरी पुर्वकै व्यसायिक तरकारी उत्पादक बन्ने उनको योजना छ ।
देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा राज्यले चाँसो नदिएको उनको गुनासो छ । यदि राज्यले लिएको नितीमा लगानी बढाई ब्यवसायिक किसानहरुलाई सहयोग गरेमा देश तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको बुझाई छ । परिवारको सहयोगले गर्दा बजार सम्म लगेर तरकारी बिक्रि गर्ने गरेका उनले आफु जस्तै खेती गरी रहेका किसानहरुलाई जम्मा गरी कृषक फोरम बनाउने सोचमा छन् । जसले गर्दा बजारीकरण र राज्यको पहुचमा पुग्न सक्ने उनको ठम्याई छ । बैदेशिक रोजगार भन्दा स्वदेशमा नै मेहनत गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने हुनाले विदेश गएका अन्य व्यक्तिहरुलाई आप्mनै देशमा काम गर्न सुझाव दिन्छन् । उनलाई यो अवस्थामा पु¥याउन वल्र्ड भिजनद्वारा संचालित प्रांगारिक तरकारी खेती, व्यवसायिक तरकारी खेती र मुल्य श्रृंखला तालिमले सहयोग गरेको उनी बताउछन् । जसरी गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रत्यक्ष किसानहरुसँग पुगी कामगरिरहेका छन् । त्यसैगरि राज्यले पनि प्रत्यक्ष किसानलाई फाइदा पुग्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वर्षेनी करौडौको तरकारीजन्य वस्तुहरु बिदेशबाट आयात गरिन्छ । अहिले सम्म हामी कुनै पनि वस्तुमा पुर्ण रुपमा आत्मनिर्भर छैनौ यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि राज्यको लगानी प्रवीधीमैत्री र व्यवसायी मुखी बनाई प्रत्यक्ष किसानको खेत बारीमा पु¥याई चौधरी जस्ता हजारौ किसानहरु जन्माउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो .
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सुनसरी आ.ब. २०७२÷०७३ को तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला ६९१४ हेक्टर जमीनमा व्यवसायिक तरकारी खेती गरीएको भएता पनि जिल्लाको माग अनुसार उत्पादन हुन नसकेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैले किसानहरुलाई आइपर्ने सेवाहरु उपलब्ध गराई प्रोत्साहित गर्ने हो भने पक्कै पनि देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय कुर्नु पर्ने छैन् ।